Import-Export: Dutu kunyevera kune hofori dzeAsia mu Africa - Tepe RELAY
Export-Export: Dutu kunyevera kune hofori dzeAsia mu Africa
Singaporean PIL neChinese Cosco vari kudzvinyirirwa sezvo musika unoderera nekuda kwekudonha kwemitengo yemafuta uye dambudziko reCovid-19.
Iri zita rePacific International Lines (PIL) rakanyatso kusimbiswa mumadokero eWest Africa. Asi kutsamwiswa kwevamwe vevatengi veTogolese yeiyo PIL, vanga vasati vagamuchira, mushure memwedzi miviri kubva musi wakarongwa, mazana emidziyo yezvinhu zveChinese zvinotarisirwa muLomé, zvinopupurira kune kunetseka kweSantan.
PIL AWANA HERE NOKUSVIMBIRA KUTI ASIA-EUROPE LINE uye KUSVIKIRA MUTENGI WETRANSPACIFIC
Iyo Chinese Cameroon Tiankang bohlokoa-Export chikumbiro mvumo ...
China: mamirioni mazana matatu emakumi matatu nemakumi matatu inotarisirwa kuIyorian cocoa -…
Yakagadzirwa hafu yezana remakore rapfuura uye ichiri kudzorwa nemhuri yeChinese Teo, iyo nhamba yepasi rose kambani yemidziyo gumi iri kuenda zvakaipa.
Mabhiriyoni 3,8 emadhora nechikwereti
Mune chikwereti chemadhora anopfuura mabhiriyoni 3,8 emadhora, haina kukwanisa kusangana nemabhanga akati wandei kubva kutanga kwegore uye parizvino iri kutaurirana nezvekutenga kwayo neSuxan state fund Temasek.
Kwayaka: https: //www.jeuneafrique.com/mag/1019931/economie/transport-maritime-avis-de-tempete-pour-les-geants-asiants-en-afrique/
Denda rinosimbisa vaScotland vakaparadzanisa